Tranga mampalahelo sy mampivarahontsana no indray niseho teto Antsirabe nandritra iny faran’ny herinandro lasa iny. Zazakely roa no samy novonoin’ireo tsy mataho-tody ka nariany avy eo.
Zazarano manodidina ny dimy volana eo no noesorina ka nariana tany anaty tatatra. Ny marainan’ny zoma lasa teo no nisehoan’izany tao Mahazina. Ankizy handeha hianatra no nahita ity razana kely ity tokony ho tamin’ny fito ora maraina. Avy hatrany dia nampandre ny mpitandro ny filaminana izay efa mandray ny andraikitra tandrify azy amin’izao fotoana izao ireo fokonolona.
Fatin-jaza maherin’ny roa volana eo kosa indray no hitan’ny mpiandry omby tao anatin’ny fokontany Antanety ny marainan’ny sabotsy. Nokendain-dreniny no nahafaty azy araka ny loharanom-baovao tany amin’ny polisy teto Antsirabe. Fantatra fa fiaraha-miasa tamin’ny fokonolona no nahafantarana ny renin’ity zaza ity, izay mipetraka eny Antanety.
Tonga naka azy tany an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Voaporofo fa bevohoka tokoa izy ary teraka, roa volana lasa izay, saingy tsy hita ny zanany. Niaiky ny heloka vitany io ramatoa nahavanon-doza io. « Zanako fahatelo izy io. Tsy manambady aho ka sahirana tamin’ny famelomana ireo zanako dia ity farany no novonoiko », hoy ilay ramatoa.
Rehefa maty ilay zaza tsy manan-tsiny dia nofonosina lamba ary dia narian-dreniny tany anaty kirihitra avy eo. Akanjo kely vao avy nomen’ny masera olona sahirana, ny zoma lasa teo, no hita teny aminy.
Nilaza ireo tompon’andraikitra eo amin’ity fokontany ity fa efa matetika isehoana tranga fanariana zaza toy izao ao amin’io tanàna io. Efa nalevin’ny fokonolona ireo zaza roa ireo talohan’ny nahitan’ny renin’ny iray teny Antanety. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana ilay renim-pianakaviana nahavanon-doza. Mbola karohina kosa ny iray. izao toe- zavatra izao no mampiseo fa tena mahantra ny malagasy ka na ny zanaka aza dia fohy vonoina mihitsy indraidray noho io fahantrana io.